musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhodhi Midfield Mastero uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname 'Cescy'. Nhoroondo yedu yeCesc Fabregas yeChidiki pamwe neS Untold Biography Facts inokuudza zvizere zvezviitiko zvinokosha kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira Upenyu hweupenyu pamberi peShoko, Upenyu hweMhuri uye dzakawanda OFF uye ON-dzika zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange;
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Early Childhood
Francesc "Cesc" Frabregas Soler akaberekwa musi waMay 4, 1987,
Cesc Fabregas Mazuva Ekuberekwa Kwevana
ari muguta reSpain rekufambisa reArenys de Mar. Akabva kumamiriro mashoma. Amai vake, Nuria, vakashanda semuchengeti kwenguva yakati vasati vambova nekambani yake yekare. Baba vake, Francesc Fàbregas Sr., vakachengetedza mhuri yake kudya nekushanda pakutanga sevashandi vasati vava nekambani yepamba.
Iye ndeyemuchena wemarudzi eCatalona background ane chiratidzo cheTaurus zodiac. Cesc Fabregas mumazuva ake evechidiki aigara mune imwe nzvimbo umo kubvongodza uye kuvhima mushonga kwaive kurongeka kwezuva racho. Akararama upenyu hunotambudza hwevechidiki nekuda kwevabereki vake kurambana. Izvi hauna kumudzivisa kuti asava nhabvu yenyika yakawanda nyeredzi.
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Cesc Fabregas naBaba (Francesc Fàbregas Sr.)
Baba vake, Francesc Fàbregas Sr. yakanga isiri iyo yakawanda inopfuma. Akatora hupenyu sevashandi vasina kuvakazi vasina ruzivo vakabatsira pakuvaka kwemazuva ano eCatalonia inozivikanwa seBarcelona. Akanga ari munhu wokutanga kubudisa bhokisi rekushandisa mumari raakashandisa mari yakawana kutarisira mhuri uye kutumira zvishoma Fabregas kumutambo wechikoro chake. Muhurukuro yemazuva ano, Francesc Fàbregas Sr. akataura zvakanyanya pamusoro pokutanga kwake kwoupenyu. Mumashoko ake ....'Sevashandi vasina ruzivo, ndakatanga upenyu nemabasa ose kunyange sezvavanouya nemamiriro akasiyana-siyana ekushanda kubva pakushambadzira nyore nekudzikinura, kusvika kunzvimbo dzakakwirira, kana kuiswa kune zvinhu zvinokuvadza, Sevashandi vekuvaka, ndakagadzirira chero chinhu! Nokudaro kwenguva yakareba ndaikwanisa kubhadhara mari yemwanakomana wangu mubhokisi rake rechikoro uye kufudza mhuri yangu. Ndakaita kuti mwanakomana wangu asaguma saiye '.
Francesc Fàbregas Sr iye zvino ane uye anotarisira makambani ake edzimba, zvose nekuda kwemuwanakomana wake Cesc Fabregas nemari yakagadzirirwa kutanga. Zvisinei, zvakakosha kuziva kuti Soccer yakanga iriwo chikamu chikuru cheupenyu hwake hwaFrancesc Fàbregas Sr. Akamboita nhabvu kunyange mushure mokunge mwanakomana wake aberekwa, uye nguva yakauya yevechidiki Fesbregas kuti atore munda, ndiye baba vake avo vakashanda semudzidzisi wake wekutanga.
Cesc Fabregas naamai (Nuria Soler).
Apo baba vake vakatarisana nebasa rake rokuvaka, amai vake, Nuria Soler, vakashanda semuchengeti kumatambo e FC Barcelona kwenguva refu. Akanga ari mumwe wevakanakisisa mu Camp Nou uyo ​​anoronga kuendesa, kugadzirira uye kupa mharidzo yezvokudya zvevakoti vemafora.
Yaiva mwanakomana wake Cesc, uyo awana mukana wechingwa wemhuri uyo akazadzisa kurota kwake kwekusiya chikafu chekudya kuti ave newayo pachesi yekodhi. Nhasi, Barcelona yakagadzirwa nechekare yekare inobereka zvigadzirwa zvose zvakabikwa zvakakonzerwa nemishonga yakadai seupfu, shuga, mukaka, mafuta, kupfupisa, poda, uye mazai.
Nuria Soler anoda mwana wake kumucheto. Zvose zviri zviviri zvisingatauriki. Muhurukuro yazvino, iye akambotaura.
'Zvichida, kuguma uye kuguma zvingave zvakapa Cesc vabereki vakagarika kupfuura ini nababa vake. Asi hapana, zvingave zvakatipa mwanakomana ari nani kupfuura iye. Tinoda mwanakomana wedu, ndiye chinhu chakanakisisa chakamboitika muupenyu hwedu '. Mukadzi Soler akaparadzaniswa nemurume wake uye ari kugara nemumwe wake.
Cesc Fabregas ane hanzvadzi yechidiki anonzi Carlota Fabregas. Ivo vose shamwari dzakanaka.
Cesc Fabregas nehanzvadzi (Carlota Fabregas)
Akagara naamai vake, Nuria Soler uye vaviri vakachengetwa nekambani mushure mekurambana naFrancesc Fàbregas Sr.
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Mashoko eWanchese Mufaro muNyika
Chokutanga, zvakakodzera kutaura kuti Cesc akanaka kwazvo uye ane unhu hunonakidza. Iwe, semukomana haana kukwevera vasikana vose. Zvadaro akanga ari ganda uye dama rake mapfupa haana kumupa iye akatarisa zvakanaka. Akazova murume akarota mukati mevasikana vakawanda vechidiki mumakore makumi maviri.
Mazuva ano, matama ake anofungidzirwa semifananidzo yakavezwa yakavezwa yaMachelangelo. Mhino yake yakakwana zvakasiyana. Miromo yake yakavakwa yakanaka: iyo inoguma mumusikana muduku mutsvuku pamakona. Mazuva ezuva anosimudza madiki mumatama ake uye chin.
Contender kuMutambo Wakaisvonaka Kwazvo Munyika
Miromo yake yakafanana nemabriji anotapira, uye cologne yake yakasimba semwedzi we pakati peusiku. Meso ake akajeka uye anotyisa. Chimiro chake chakasimba zvakasimba uye chakakwana zvakakwana sezvinofungidzirwa zvekutuka zvinomira pasi pemakumbo ake. Bvudzi rake rakafanana nemafungu akadzika ayo musikana wese asingadi kutasva. Hazvishamisi kuti vazhinji vakadzi vaizofanotaura kuti kubata kwake kwaizove kwakanyorova uye kwakanyorova, kusimba uye kunyengedza.
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Teenage Love Life
Cesc Fabregas uye musikana wake wekare Carla Garcia akadanana sevaya vachiri kuyaruka kumashure kwavo muSpain. Vakava murume nemudzimai apo Cesc ane makore ane gumi nemana ainzi Cesc akasaina neArsenal kubva kuBarcelona.
Cesc Fabregas Ubwana Hwemhandara (Carla Garcia)
Vakanga vari pamwe chete kwemakore manomwe uye vazhinji vaitarisira kuti vave newanano yomuchato. Zvisinei, the football star yakanzi yakakamurwa naGarcia musi waApril 29, 2011.
Cesc Fabregas naCarla Garcia (Rudo rwake rwekutanga)
Maererano nemishumo, vakaroorana vakaramba vari voga saka Cesc akasarudza kuputsa naye. Zvisinei, hazvisi pachena kana kuonekwa kweSemaan muhupenyu hwaF Fabregas chaiva chikonzero chekuguma kwehukama hwake hwekare kana kwete, asi baba vaF Fabregas vakabvuma kuti chisarudzo chaiva "chinopfuura chake kupfuura Carla's". Akati zvakare "" Izvo zvinonyadzisa. Vakanga vava pamwe kwenguva refu uye akanga ari musikana akanaka. "
Cesc Fabregas 'musikana wechipiri Daniella Semaan anozivikanwa sewaimbova mudzimai wemamiriyoni, uyo anozivikanwa nokuda kwezvinhu zvake zvakanakisisa, zvepamusoro uye zvemamiriyoni muKensington uye Chelsea. Munguva yavo, vakaroorana vane vana vaviri, musikana ane makore gumi nemana uye ane mwana wemakore mapfumbamwe pamwe chete.
Cesc shamwari dzake dzepedyo dzakafumura kuti Cesc Fabregas ainge aita seasina kufara uye akanyanya kusununguka. Mutambi wechikwata kunyange akatora tattoo itsva ine nyenyedzi ine tsamba "D" mukati nechokuruboshwe rwake. Zvichienderana nemashoko akawanda echiArabic, zvakaratidzwa kuti zvinoreva Upenyu Hwangu Nokusingaperi.
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Nzwisiso muRudo Nyaya yaCesc Fabregas naDaniela Semann
Pakati pevose vasina kuroora vakadzi vanoyemura munyika, moyo waCesc Fabrega wakawira kune mukadzi mumwe chete uyo akaita zvose kuti apedze imba yake nekuda kwe rudo. Haasi mumwe kunze kweLebanese born 'Daniella Semaan '.
Zvakaita sei Daniella Semaan kupinda muupenyu hwaCesc Fabregas
Iye anowanzosunganidzwa semudzimai akakuvadza Arsenal star star Fabregas mukatikati memamiriyoni emamiriyoni pound divorce divorce. Akarambana nomurume wake wekare uyo ane pfuma mabhiriyoniire kuitira kuti agadzikane nemunhu wekare weArsenal.
Elie Taktouk anokanganiswa naF Fabregas uye Ex Wife
Maererano nePropical Billionaire 'Elie Taktouk ',
"Ndakashamisika kuti mitemo ye UK yakadaro zvokuti matare achaba imba yemurume ndokuipa kumukadzi anoita upombwe kugovana nemukomana wake uyo akamupinza"? Anofadza Elie Taktouk.
Zvichienderana nezvamunotenda, kune mabhii maviri ekuti Arsenal mutevedzeri wemutambo Cesc Fabregas akasangana sei nesikana yake inonakidza Daniella Semaan.
Nhoroondo yake yezviitiko inofamba kuti vakashandura nhamba mushure mokunge vakashinga kuenda kwaari pane imwe nzvimbo yokudyara yeJapan muLondon kuti vamukumbire autograph kumwanakomana wake wematambo-mhanje yaakanga aine kumurume wake wekare. Mushure mekutora autograph, mifananidzo yakaratidza kuti gorgeous Miss Semaan hip-yakagumburwa zvinopesana nepamusoro peresitorendi vasati vashandura chigamba chemapuranga, iyo yakanyorerwa nhamba yake yefaira, kune tafura yemutambo.
Mutsara wokutanga 38-year-old Mutungamiri Taktouk aiva nechiitiko chacho paakazarura pepanhau rake mangwanani munaJune 2011 kuti akwanise kuonekwa nemudzimai wake, uyo ariwo 38, achigovera zuva zuva pamwe chete neSpain international kumusi wezororo mu Kunaka kumaodzanyemba kweFrance.
Uye pane zvinhu zvishomanana zvakanyanya kuisa munhu kudya kwekudya kwake kwekudya kupfuura kuwana bhiini-bhadi 'chakavanzika brunette' chakashongedza nyika yose inozivikanwa nemutambo mune imwe nyika kunze kwenyika inoitika kuva mudzimai wake.
Mr Taktouk haana kutora kuva cuckolded - saka pachena - akarara. Vhiki ino, akazvuzvurudzira Fabregas ane makore ane gumi nemana muhondo inoramba ichitamba (uye yakashata) yepamutemo nemurume wake akazova mukadzi pamusoro pemari yemhuri yavo yeC25.
Pachanzwi cheDare reKutsvaga muLondon, akapomera Miss Semaan zvekurevera nhema kumutongi mukurambana kwavo mwedzi wapera nekutsvaga kuti mutambi wacho haabatsiri upenyu hwake hwakanaka.
Mutungamiri Taktouk, uyo anobva kuRebhanoni, aida kuchinja mutemo unoreva kuti anofanira kutengesa £ 7 mamiriyoni edzimba avo vaviri vakagoverwa muBelgravia kuti vape mari yake ye £ 1.4 yemari yakawanda kutenga imba itsva mumusha . Anoshatirwa kuti mukati memavhiki matatu ekuisa imba yechipiri yepamusoro pamusika, akagamuchira £ 5.4 mamiriyoni emabhizimisi kubva kune bhizinesi riri muBarcelona - rakafambisa kambani iyi yaiva yeF Fabregas.
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Mhuri Yakanaka Mifananidzo
Fabregas atova nemwanasikana wemakore maviri, Lia, pamwe neshamwari yake inofadza Semaan. Pasi pane mifananidzo yakaisvonaka yemhuri yakanaka.
Mhuri Yakanaka yaCesc Fabregas
Cesc naMhuri vari muvharo remukova wakavhara.
Cesc Fabregas neChirungu Shamwari vanochengetedza kunze
Cesc Fabregas uye Mhuri vari muchitarisiko chemukati chaipo.
Kupemberera Premier Premier League Trophy ne Girl Girl.
Cesc Fabregas uye Mhuri vachipemberera chikwata cheCentral Premier League.
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Aine kuberekwa kwemwana wechipiri 'Capri Fàbregas'
Kubva mumunda zvinhu zvakaramba zvichienda zvakanaka zvakanakisisa kuna Fabregas, zvichienderana nekuzvarwa kwomwana wake wechipiri mu2015. Akange asingagoni kuva nemufaro wake mushure mokuva baba zvakare, kutumira selfie pa Facebook kubva paimba yekutakura nemusikana wake Daniella Semaan uye mwana achangoberekwa.
Cesc Fabregas achipupurira kuberekwa kwemwanasikana wake.
Fabregas atova nemwanasikana wemakore maviri, Lia, anogara kwenguva refu Semaan.
Pane peji yake yepamusoro peji Facebook muchengeti akazivisa mashoko achiti: 'Baba zvakare. Handikwanisi kumira, ndinokutendai @daniellasemaan7 yekuunza imwe ngirozi mumhuri uye kuva noushingi '#CapriFabregasSemaan
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -The Product of a Home Broken
Cesc Fabregasa pa10: Chigadzirwa cheBurken Home
Cesc Fabregas akaparadzaniswa nemubereki akamurova zvakanyanya pazera remakore 10. Asi kurwadziwa kwacho kwakaderedzwa kwekanguva nekupindira kwaPep Guardiola uyo aimbova mutungamiriri weCartan club (FC Barcelona). Akanga ari mutambi wechidiki Cesc akashandura paakanga achikura. Pep Guardiola akamunyaradza. Akasayirwa shati yeF Fabregas uye paiva mharidzo: "Rimwe zuva, iwe uchava nhamba yeBarca". Irota iri rakaitika.
Cesc Fabregas Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts -Pakutanga Football Career
Fàbregas yakatsigira FC Barcelona kubvira achiri mwana uye akaenda kumutambo wake wokutanga paakanga ava nemwedzi mipfumbamwe nekuru vake. Akatanga chikwata chake chebhola yebhora ne CE Mataró, asati asayinirwa kuBarcelona La Masia wechikoro academy ane makore 10 mu1997.
Cesc Fabregas Bhora Rokutanga Basa
Mutungamiri wake wekutanga, Señor Blai, akati haana kusarudza Fàbregas pamakwikwi neBarcelona mukuedza kumuchengeta kubva kune avo vanoona. Nzira iyi, zvisinei, yakange isingagoni kumira neBarcelona kwenguva refu, uye Mataró akapinda mukati ndokubvumira Fàbregas kudzidzisa neBarcelona rimwe zuva pavhiki. Pakupedzisira Fàbregas akabatana neBarcelona academy nguva yakazara. Kudzidziswa kwake kwokutanga kwakafanana ne mudziviriri anodzivirira kutamba pamwe nemazita anokosha akadai Gerard Piqué uye Lionel Messi. Kunyange zvazvo akanga ari muchengeti wepamusoro, pane dzimwe nguva akatarisa zvinopfuura zvinangwa zve 30 mumwaka wemakwikwi evechidiki. Akange asina kukwanisa kutamba mutambo wechikwata chekutanga pa Camp Nou.
Kubvira achiri muduku, Fàbregas akaratidza kuoma kwepfungwa nekuzvitsaurira kumutambo uyu wakamuisa iye oga semhizha rechokwadi. Pazera re8, nekurota kwekuita zvakanyanya mupfungwa dzake, Fàbregas akanga atove akashanda zvakaoma uye achichenjerera nezvekudya kwake, achisarudza hove nemiriwo pane zvokudya zvinokurumidza. Pazera remakore 10, akabatana nekambani yebhola yeCamp Barcelona vechidiki vechikoro, nzvimbo yakakurumbira yekudzidzisa vamwe vatambi vechidiki vanovimbisa.
Muzhizha re 2003, Fàbregas akaratidza tarenda yake inoshamisa muFIFA yeU-17 World Championship muFinland, apo mutambi wemitambo akaendesa Spain kuchinzvimbo chechipiri, akagamuchira Golden Ball semutambo mutsva mukurumbira uye akagamuchira muhope weGold Boot kuva muchengeti wemutambo mukuru.
Kune Fàbregas, chisarudzo chekubva kumba uye kumhanyira kuEngland chaive chikuru. Mwedzi mishomanana mushure meFIFA U-17, Fàbregas yakasaina chibvumirano chake chekutanga chebhizimisi, neChristian League club Arsenal. Zvose zviri nhoroondo.
Thiago Alcantara Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts